ဘာမှထည့်စရာမလိုဘဲ Xfce ထဲက Gnome2menu ကိုယူပါ Linux မှ
XunilinuX ပါ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ဟယ်လို!! ယနေ့ငါဟောင်း၏လက်တွေ့ကျတဲ့ menu ကိုမည်သို့ရှိသည်ဖို့သင်မည်သို့ပြပါမယ် GNOME2en Xfce ဘာမှသွင်းစရာမလိုဘဲထူးဆန်းတဲ့ applet ကိုသုံးစရာမလိုဘဲ Gnome မဟုတ်ပါ အိမ်ထောင်ဖက်အောက်ပါပုံများမှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
ကောင်းပြီ၊ အမှတ်ရပြီ။ သင်ဤသင်ခန်းစာကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကရှိပြီးသား menu နှင့်အတူ panel တစ်ခုတွင်အခြား menu ကိုဖန်တီးပါ။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် panel ၏မည်သည့်အချည်းနှီးသောအစိတ်အပိုင်းကိုမဆို right click နှိပ်၍ ထည့်ပါ Panel ကို ဦး စားပေးတစ်ချိန်ကကျွန်တော် tab ကိုရွှေ့ ဒြပ်စင် ပြီးတော့ကျနော်တို့ကိုနှိပ်ပါ အမှတ်လက္ခဏာ + ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်သောစာရင်းမှ element ထဲသို့ element ထည့်ရန်ဖြစ်သည် Applications မီနူး.
ယခုတွင်ငါသည် menu ကိုဖိုင်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ် applications များ။ ဒီအတွက်ငါတို့အကြိုက်ဆုံးစာသားတည်းဖြတ်သူကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါအတွင်းပိုင်းကိုကူးယူပါ။
Menu PUBLIC "- // freedesktop // DTD Menu 1.0 // EN" "http://www.freedesktop.org/standards/me…0/ menu.dtd"> Xfce ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ xfce-accessories.directory အသုံးပြုခွင့် Core အမွေအနှစ် Utility exo-file-manager.desktop exo-terminal-emulator.desktop ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု xfce-development.directory ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပညာရေး xfce-education.directory ပညာရေး ဂိမ်းများ xfce-games.directory ဂိမ်း ဂရပ်ဖစ် xfce-graphics.directory ဂရပ်ဖစ် မာလ်တီမီဒီယာ xfce-multimedia.directory အသံ ဗွီဒီယို အသံဗီဒီယို ကွန်ယက် xfce-network.directory ကွန်ယက် ရုံး xfce-office.directory ရုံး
ဤအရာသည် Xfce မှပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာသည့်မီနူးဖိုင်ဖြစ်ပြီး၊ အချို့အရာများကိုသာဖယ်ရှားပစ်ရန်ငါအသုံးပြုသော application အမျိုးအစားများသာကျန်ပါလိမ့်မည်။
သင်အသုံးပြုသောပရိုဂရမ်အမျိုးအစားမရှိပါကသင်လုပ်ရန်မှာသင်လိုချင်သောအစဉ်အတိုင်းထိုအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပိုင်းကိုထည့်ပါ။ Xfce မှပုံမှန်ယူဆောင်လာသည့်မူရင်းမီနူးဖိုင်မှကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအမျိုးအစား၏ "အပိုင်း" ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူးယူသည်။
ဖိုင်ကိုမည်သည့်လမ်းကြောင်းမှမဆိုသိမ်းဆည်းသည် (သူတို့နောက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်တီးထားသောဖိုင်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်) အောက်ပါအမည်ဖြင့် xfce-applications.menu
ဤနည်းအားဖြင့်၊ ပထမ ဦး ဆုံးမီနူးတွင်၊ အမျိုးအစားများသာလျှင်အပလီကေးရှင်းများပေါ်လာလိမ့်မည်။
ထို့နောက်မီနူးဖိုင်ကိုဖန်တီးရန် စံနစ်ကျနော်တို့ယခင် menu ကိုအတူတူပြုပါ, သာကျွန်တော်တစ် ဦး အချည်းနှီးသောစာသားအယ်ဒီတာထဲသို့ကူးယူ
ကျွန်ုပ်တို့၌မီနူးဖိုင်တွဲနှစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိပြီးသား (ယေဘူယျ menu ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြင့်ဖိုင်ဖြစ်သော) menu ဖိုင်ကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ applications များ နှင့်တတစ်ခု paste စံနစ်.
ငါတို့အဖြစ်ဝင် အမြစ် terminal file ကိုဖွင့်ပြီးထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ file manager သို့ sudo နောက်မှသင်အသုံးပြုသောဖိုင်မန်နေဂျာ (ထွ: sudo thunar၊ sudo pcmanfm) နှင့်ငါတို့မှရွှေ့ / etc / xdg / menus / ဖိုင်ကိုကူးထည့်ပါ xfce-applications.menu ဖိုင်တွဲထဲမှာ။ လက်ရှိဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အစားထိုးလိုပါသလားဟုမေးလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ဟုတ်ကဲ့ထည့်ပြီးနောက်ခေါ်သောအခြားဖိုင်ကိုကူးထည့်ပါလိမ့်မည် xfce-system.menu.
ဤအရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးမီနူးကိုညာဖက်နှိပ်ပြီးထည့်ပါ ဂုဏ်သတ္တိများ ဘယ်မှာကပြောပါတယ် မီနူးဖိုင် ကျနော်တို့၏ option ကိုရွေးပါ စိတ်ကြိုက် menu ဖိုင်ကိုသုံးပါဖိုင်အသစ်များကိုသိမ်းဆည်းသည့်လမ်းကြောင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားသည် (၎င်းကို / etc / xdg / menus များရှိခဲ့ပါ။ ) ငါတို့တ ဦး တည်းကိုရွေးပါ applications များ။ ပြီးရင် menu ရဲ့ title ကိုပြောင်းလိုက်တယ် applications များ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ distro ၏အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သူမည်သူမဆိုမှ icon ကိုနှိပ်ပါ (Menu မှအရာအားလုံး» Properties)
အခြားတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းထပ်တူပြုသော်လည်းဤတစ်ကြိမ်တွင်ဖိုင်ကိုသိသာစွာအသုံးပြုလိမ့်မည် xfce-system.menu ကဆိုပါတယ် menu ကိုထုတ်လုပ်ရန်။ ကျနော်တို့တံဆိပ်ကိုပြောင်းလဲပစ် စံနစ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုင်ကွန်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ် (xD အိုင်ကွန်မပါဘဲမထည့်နိုင်ပါ) ဂီယာတစ်ခုသို့မဟုတ် "System Configuration" နှင့်ဆက်နွှယ်သောအရာတစ်ခုခု၏။
အခုတော့သာထားရန်နေဆဲဖြစ်သည် xfce4-жерлер-plugin ကို ပိုကောင်းအဖြစ်လူသိများ သောနေရာများ မီနူးနှစ်ခုလုံး၏အလယ်တွင်၎င်းကိုထည့်ရန်နည်းလမ်းသည်မီနူးတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ပလပ်အင်တွင်အိုင်ကွန်နှင့်တံဆိပ်ပေါ်လာစေရန်၎င်းသည်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုညာဖက် နှိပ်၍ ရွေးပါ Show: Icon နှင့် Label။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် panel တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအနည်းငယ်ခြား။ spacers အချို့ထားနိုင်သည်။ သူတို့လိုချင်ရင် Launchers တွေလည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
ထိုအဆင်သင့် !! အိမ်စာပြီးပြီ
ငါဒီ menu တွေကိုငါနှစ်သက်သလိုလုပ်လိုက်တယ်၊ သူတို့ကို Gnome နဲ့ 100% တူအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ရလဒ်ကအရမ်းဆင်တူတယ် xD ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » ဘာမှထည့်စရာမလိုဘဲ Xfce ထဲက Gnome2menu ကိုယူပါ
ငါဟာမင်းရဲ့အလှူငွေနဲ့ငါ့ ဦး ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီ၊ ငါ့အရသာအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။
ငါတူတူပဲပြောနေတာပဲ၊ ဒါကအဆင့်ပဲ၊ ဒါကလုံးဝသင့်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုလား၊ ဒါမှမဟုတ်အခြားဘလော့ဂ်တခုမှာတွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့တိုးတက်မှုလား။
နောက်ဆုံးမှာ xfce ကိုထည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ အံ့သြစရာ!
ကောင်းတယ် !! ရိုးရှင်းပြီးပြီးပြည့်စုံသော။ သင်ခန်းစာအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ် !!
ထိုအဟုတ်, ဒါကြောင့်လုံးဝငါ၏အအလှူငွေဖြစ်ပါတယ်။ ငါ menus တွေကိုပြုပြင်လိုက်ပြီ၊ မင်းသူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါ့အပြင်ငါအလုပ်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်၊
သင့်မှာပြhaveနာရှိရင်ဘယ်လိုပုံပေါ်လဲဆိုတာသိနိုင်အောင် screenshot တစ်ခုထားပါ
ကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် application menu ထဲကတစ်ခုသတိထားရမှာပါ။ ဘယ်မှာလဲ:
Menu PUBLIC "- // freedesktop // DTD Menu 1.0 // EN"
OOoOoraleeee !!!! ဒီနည်းလမ်းကအရမ်းကောင်းပါတယ်၊ လောလောဆယ်မှာကျွန်ုပ်သည် netfbook ပေါ်တွင်သာ Xfce ကိုသုံးပါသည်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာကို desktop ပေါ်တွင်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤအကြောင်းအရာသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ အနည်းဆုံး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့ပါသည်။ ။
Hmm မတူပါ၊ XunilinuX ၏ပံ့ပိုးမှုသည် menu ကိုစီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ Gnome2 ၌ရှိသကဲ့သို့သင်ပေးထားသော link တွင် menus များကိုတည်းဖြတ်ပုံကိုသာပြောသည်။
ငါသာဘာသာစကားအသစ်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် link ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသည်မှန်သည် ... ငါကပြောသည်
ခေါင်းစဉ်မှာအသစ်မဟုတ်ပါကမည်သူကဂရုစိုက်မည်နည်း။ ဘယ်သူမှမပြောပါဘူး အရေးကြီးတာကအလှူငွေပါ။
သတင်းအချက်အလက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်သာဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကိုခြားနားစွာနားလည်ပါကသူတို့၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ။
ဒီမှာ gnome2 အတွက်မည်မျှလွမ်းဆွတ်မှုရှိသည်။ xd
Sebas Lara ဟုသူကပြောသည်
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Gnome2 အတွက်လွမ်းဆွတ်မှုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလျှင် distros အမြောက်အများကိုကြိုးစားပြီးမှကျွန်ုပ်ချစ်သော fedora14 သို့ပြန်သွားခဲ့သော်လည်းမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှကျွန်ုပ်ကိုမအောင်မြင်ပါကကျွန်ုပ်သည်အလုပ်သို့ xfce ဖြင့် fedora17 သို့ပြောင်းရွှေ့ရုံသာ ဖြစ်၍ သင်၏ပို့စ်သည်ပြိုလဲသွားသည်။ ကောင်းကင်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Sebas Lara ကိုပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပိုကောင်းအောင်သိမ်းလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ debian7ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ xfce နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ထားသင့်တယ်။ ငါဆာဗာမှာ debian stable (gnome 2) ကိုသုံးနေတုန်းပါ။ အခင်းအကျင်းအပြောင်းအလဲတချို့နဲ့အတူကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတယ် gnome shell လိုအပ်ပါတယ် လမ်းလျှောက်ရန်အရှိန်မြှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏ ... ဤအသင်းများကိုမမြင်ရတစ်ခုခု။
XFCE haha ​​ကိုသွားချင်ရင်ဒီဟာကအသုံးဝင်ပါတယ်
ငါသည်လည်းအတူတူလုပ်ခဲ့သော်လည်း LXDE တွင်ကျွန်ုပ်အားအရာအားလုံးကိုဖိုင်တစ်ခုတည်းနှင့်အတူထားရန် ပို၍ အဆင်ပြေစေခဲ့သည်။
Cris Nepita အားစာပြန်ပါ
မင်းရဲ့ entry ကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ် ၎င်းသည် Debian7ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Fritzing - အခမဲ့အီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်းကိရိယာ